24 April 2022 - Progressive Voice Myanmar
Home Coup Updates 24 April 2022
Coup Update 106 Views
April 24th, 2022 • Author: • 1 minute read
ASEAN Parliamentarians for Human Rights/ Open Letter on the anniversary of the Five Point Consensus on Myanmar to ASEAN and Dialogue Partners/ Burmese version/ Bahasa Indonesian version. Khmer version./ Thai version.
Ministry of Home Affairs and Immigration/ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပြည်ထဲရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၀၃/ ၂၀၂၂) – အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာန CDM ဝန်ထမ်းများ အုပ်ချုပ်မှုကော်မတီအား ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း
Ministry of Home Affairs and Immigration/ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပြည်ထဲရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၀၂/ ၂၀၂၂) – မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ CDM မီးသတ်ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်စားပြုကော်မတီအား မီးသတ်ဦးစီးဌာနအဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း
Ministry of Home Affairs and Immigration/ အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ၊ ပြည်ထဲရေးနှင့် လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန အမိန့်ကြော်ငြာစာအမှတ်(၀၃/ ၂၀၂၂) – လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန CDM ဝန်ထမ်းများ ကိုယ်စားပြု ကော်မတီအား လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးဦးစီးဌာန အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခြင်း